CIN Khabar १३ औँ साग पर्यटन प्रवर्धनको उपयुक्त अवसर
१३ औँ साग पर्यटन प्रवर्धनको उपयुक्त अवसर सागमा प्राविधिकसहित २ हजार २३ जना, लगभग दुईसय जना पत्रकार पनि नेपालमा
सिर्जना बराल मंगलबार, मंसिर १७, २०७६, ०९:०१:००
तस्विरः राजन रुचाल ।
काठमाडौँ । १३ औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) का विभिन्न खेलहरु काठमाण्डौँसहित पोखरा र जनकपुरमा चलिरहेको छ ।
सागमा भाग लिन ७ देशका खेलाडिसँगै प्राविधिक टोली पनि नेपालमा छन् । सागले आउँदै गरेको भ्रमण वर्ष सन् २०२० लाई पनि सहयोग पुर्‍याउने सरकारको अपेक्षा छ ।
अहिले नेपालमा २ हजार ७ सय १५ विदेशी खेलाडी छन् । २ हजार २३ जना प्राविधिक टोली र लगभग दुईसय जना पत्रकार पनि सँगै आएका छन् ।
कति देशका दर्शक पनि आएका छन् । अबको ठीक एक महिनापछि सुरु हुने भ्रमण बर्ष २०२० का लागि विदेशी खेलाडी, दर्शक, अफिसियल र पत्रकारको आमगनले सहयोग पुर्‍याउने सागको खेल हेर्न रङ्गशाला पुग्नुभएका टंक कट्टेल बताउनुहुन्छ ।
भ्रमण वर्ष २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने सरकारको लक्ष्य छ । अन्तराष्ट्रियस्तरका यस्ता कार्यक्रमले भ्रमण वर्षको बारेमा विश्वमा चिनाउन सहयोग पुग्ने खेलाडीहरूको पनि अपेक्षा छ ।
कराँतेका खेलाडी उषा थापा खेल हेर्न आएकाहरूले नेपालबारे सकारात्मक सन्देश लगे पर्यटक बढ्न सक्ने बताउनुहुन्छ । सागको आयोजक देश भएकाले खेलको माध्यमबाट नेपाललाई चिनाउने अवसर भएको र यसबाट अरु पर्यटकलाई आकर्षित गर्न पनि सजिलो हुने सरकारले अपेक्षा गरेको छ ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सहसचिव अणप्रसाद न्यौपाने सागले भ्रमण वर्षको प्रचारप्रसारमा सहयोग पुर्‍याउने विचार राख्नुहुन्छ ।
साग आयोजनास्थल पर्यटकीय क्षेत्र भएकाले पनि यसले सकारात्मक सन्देश जाने उहाँको भनाइ छ । १३ औं साग अन्तर्गत काठमाडौँमा १९, पोखरामा ८ र जनकपुरमा एउटा खेल हुनेछन् ।
सागका लागि नेपाल आएका पाहुनाहरूलाई उचित स्वागत र सूचना दिन सके दक्षिण एसियाली देशमा नेपाल बारे सकारात्मक सन्देश जानेछ र यसबाट भ्रमण वर्ष सफल बनाउन मद्दत पुग्ने छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, मंसिर १७, २०७६, ०९:०१:००
बराल सीआईएनका संवाददाता हुनुहुन्छ।
क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेमा कोरोना सङ्क्रमण
सुपर ओभरमा दिल्लीको जीत
साग आज सकिँदै, प्रधानमन्त्रीले सम्वोधन गर्ने
नेपालद्वारा मालदिभ्स २-१ ले पराजित
साग प्रतियोगितामा आज १५ विधाका खेल हुँदै
काठमाडौँमा १३ औँ सागको भव्य उद्घाटन
जरायोटारबासीको एकिकृत वस्ती मोह
गाउँघरबाट चल्दै विषादीबिना उत्पादनको लहर
अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा खोई ?
कृषिमा बजेट ३४ अर्ब ८० करोड, खै किसानलाई पेन्सन ?
उदाहरणीय बन्ने होडमा स्थानीय सरकारहरू
नेपालको आफ्नै भूउपग्रह राख्ने सहमति हुँदै
आम्दानी र खर्चको हिसाब राख्दैनन् किसान
विदेश जाने महिलामाथिको प्रतिबन्ध हटाउन मानवअधिकार आयोगको माग
उत्पादनदेखि बजारसम्म किसानलाई समस्या